ရော်ဘာစက်ယန္တရားများ၊ ရော်ဘာပစ္စည်းကိရိယာများ၊ ကုန်ကြမ်းများ၊ - ရော်ဘာစက်ရုံပေးသွင်းသူ
1. ဆန့စက်: စမ်းသပ်ရော်ဘာ elongation ၂။ အိုမင်းခြင်းသေတ္တာသေတ္တာ - ပလတ်စတစ်၏သက်တမ်းအရင့်ရလဒ်ကိုစမ်းသပ်ရန်ရာဘာနှင့်ပလပ်စတစ်ထုတ်ကုန်များ၊ လျှပ်စစ်ပစ္စည်းနှင့်အခြားပစ္စည်းများအတွက်ပူသောလေအားအိုမင်းခြင်း...
အသိဉာဏ်ရှိသောသဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကာကွယ်ရေးရောနှောခြင်း (သုံးထပ်စက်ရုံတည်ဆောက်ပုံ) အတွက်အရန်စက်စက်၏အစီအစဉ်ဇယားကွက်။ အသိဉာဏ်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးပြည်တွင်းရေးရောနှောများအတွက်အရန်စက်စနစ်၏ Flo...
တစ် ဦး kneader နှင့်ပြည်တွင်းရေးရောနှောအကြားခြားနားချက်ကဘာလဲ?
ဒူးထောက်သူများနှင့်ရောနှောစက်များသည်အမှန်တကယ်စက်မှုလုပ်ငန်း၏လက်ရှိထုတ်လုပ်မှုလိုအပ်ချက်များနှင့်အညီဖြစ်သည်။ သို့သော်၎င်းတို့အသုံးပြုမှုသည်အတူတူမဟုတ်ပါ၊ တစ်ခုချင်းစီတွင်ကိုယ်ပိုင်လိုအပ်ချက်ရှိသည်။ အော...
Kneader သည်ပလတ်စတစ်နှင့်ပလတ်စတစ်ပြားများကိုပလတ်စတစ်နှင့်ပက်ခြင်းပြုလုပ်ရန်အတွက်အသုံးပြုသည်။ Kneader ၏အမျိုးအစား: ဖွဲ့စည်းပုံအရ၎င်းကိုဖိအားပေးသည့် kneader (tumble mixer) နှင့် open kneader အဖြစ်ခွဲခြာ...
ရော်ဘာရောနှောစက်ပေါ်ရှိအရန်စက်သည်အတွင်းပိုင်းရောနှောရန်ရော်ဘာအမျိုးမျိုးနှင့်ကုန်ကြမ်းများကိုသယ်ဆောင်ရန်၊ အလေးချိန်နှင့်အစာကျွေးရန်အတွက်အရန်ပစ္စည်းများကိုပေးသည်။ များသောအားဖြင့် - ကာဗွန်အနက်ရောင်အမှု...
မူပိုင်ခွင့်© 2019-2020 ရော်ဘာစက်ရုံပေးသွင်းသူ Ltd. အားလုံးမူပိုင်ခွင့်ရှိသည်
ရော်ဘာစက်ယန္တရားများ၊ ရော်ဘာပစ္စည်းကိရိယာများ၊ ကုန်ကြမ်းများ၊